मुख्य समाचार Archives - Page 30 of 369 -
पौष ४ गते २०७६
डा. भक्तमान श्रेष्ठका अपहरणकारी पक्राउ
डा. भक्तमान श्रेष्ठका अपहरणकारी गौतम योञ्जन ९ वर्षपछि पक्राउ परेका छन् । डाक्टर श्रेष्ठलाई अपहरण गरी फिरौती लिएका योञ्जनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बिहीबार महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरेको हो । सीआईबीका प्रवक्ता बेलवहादुर पाण्डेका अनुसार योञ्जनलाई बिहीबार नै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरी केन्द्रीय कारागार, सुन्धारा पठाइएको छ । २०६७ साल जेठ ४ गते अस्पतालबाट घर फर्कने डाक्टर श्रेष्ठ अपहरणमा परेका थिए । अपहरण पश्चात श्रेष्ठलाई काठमाडौं र… पुरा पढौ
महराको मुद्धा अबको १ महिनामा टुंगिएला ?
उच्च अदालत पाटनले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलाई नै सदर गरेको छ । साथै महराको मुद्दा एक महिनाभित्र किनारा लगाउन भनेको छ । संसद सचिवालयकै कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा १९ असोजमा पक्राउ परेका महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । महरालाई १८ कात्तिकमा डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो । पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध महरा ५ मंसिरमा उच्च अदालत गएका थिए… पुरा पढौ
हिउँदे अधिवेशन आजदेखि, सभामुख चयन कहिले ?
संघीय संसदको हिउँदे अदिवेशन आज (शुक्रबार) देखि सुरु हुँदैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वानमा शुक्रबार दिउँसो २ः०० बजे संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को पाँचौँ अधिवेशन बस्न लागेको हो। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा पनि लिइन्छ। आजको बैठककाे प्रमुख कार्यसूची प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। १४ असोजमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ। संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास… पुरा पढौ
राजा वीरेन्द्रको निजी निवास श्रीसदन र उनले प्रयोग गरेका सवारीसाधन पनि अवलोकन गर्न पाइने भएको छ । नारायणहिटी सङ्ग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले सो कुरा बताएका हुन् । यसअघि सो सङ्ग्रहालयमा ती सामग्री प्रदर्शनमा राखिएका थिएनन् । पुरातत्व विभाग, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय छाउनी र मोरङ उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी सङ्ग्रहालयको लामो अनुभव सँगालेका कार्यकारी निर्देशक दाहालले उक्त सङ्ग्रहालयको राम्रो व्यवस्थापनसहित राजा वीरेन्द्रका निजी प्रयोजनका… पुरा पढौ
लोक सेवा परीक्षा पनि कमाउने धन्दा !
लोक सेवाको जाँच दिनेहरु जागिर खानै आएका हुन्छन् तर लोकसेवाको परीक्षामा पास भएर पनि जागिर नखाएको पनि भेटिएको छ । आठ पटकसम्म नाम निकालेर जागिर नखाई बैकल्पिकलाई मोटो रकम लिएर आफ्नो ठाउँ छाड्ने गरेको पाइएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले आठ पटकसम्म एकै व्यक्तिले लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको तर नियुक्ति नलिएको पाइएको बताए । धादिङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नासुमा नाम निकालेका एक व्यक्तिले यस्तो गरेका… पुरा पढौ
महरा अझै थुनामै रहने
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा थुनामै रहने भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले यसअघि महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो । थुना आदेश गैरकानुनी रहेको दावी सहित महराले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । उनले साधारण तारेखमा बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुंवरको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको हो । जिल्ला अदालतको सदर भएसँगै… पुरा पढौ
१२ वर्षअघि मिगौलाको प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओली नियमित डायलासिसका लागि अस्पताल पुगेका छन्। बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओली मनमोहन कार्डियो भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा महाराजगन्ज पुगेका हुन्। पछिल्लो समय मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि निरन्तर रुपमा डायलासिस गराउँदै आएका प्रधानमन्त्रीको डायलासिस जारी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अहिले जानकारी दिएका छन् । पुरा पढौ
नेविसंघ रिले अनशनमा, यस्तो छ कारण
नेपाली कांग्रेसको मुख्यालय वीपीनगर सानेपामा कांग्रेसके भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का रिले अनसन बसिरहेको छ । पूर्व महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले पक्षधर विद्यार्थीहरुले विधान अनुसार महाधिबेशन सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै रिले अनसन बसेका हुन् । बुधबार मध्यान्न्ह १२ बजेदेखि सानेपामा १२ घण्टे रिले अनसन सुरु भएको हो । बुधबार मध्यान्ह १२ बजेदेखि मध्यराति १२ बजेसम्म रुपा शर्मा, पद्यमा भुषाल, बन्दा बोगाटी, रोश्मीता कार्की र ललिता श्रेष्ठ अनसन बसेका थिए… पुरा पढौ
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठक बिहीबार दिउँसो बस्दैछ । संसदको हिँउदे अधिवेशन शुरु हुनु एक दिन अगाडि कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो । बैठक काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो १ः३० बजेका लागि डकिएको छ । संसदमा के के विषयलाई कसरी उठाउने, उठाउनु पर्ने विषयबस्तुहरु के के छन् भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको सांसद डा डिला संग्रौलाले जानकारी दिइन् । सरकारले कतिपय विधेयकहरु संविधानको मर्म र भावना… पुरा पढौ
वडाध्यक्षद्धारा निर्धात कुटिए प्रशासकीय अधिकृत
रूकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसी र सूचना प्रविधि अधिकृत गणेश चन्दमाथि कुटपिट भएको छ। कुटपिटमा संलग्न भएकोको आरोपमा प्रहरीले आठबीसकोट-३ का अध्यक्ष केशरमान विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कार्यालयको काम सकेर आवासतर्फ फर्कंदै गर्दा बुधबार साँझ ६ बजेतिर आठबीसकोट–९, राडीज्युलामा आफूहरुमाथि कुटपिट भएको उनीहरुले बताएका छन्। चेनले आक्रमण गर्दा केसीको टाउकोमा चोट लागेको छ। उनको टाउकोमा पाँच टाका लगाइएको छ। चन्दलाई भने सामान्य चोटपटक मात्रै… पुरा पढौ